Abablogi abangamadoda abagqwesileyo kunye neeCeles: Iveki ephelileyo I-Swag yeCawe ayisebenzi
MImfashini ye-en kwi-instagram isenokungathandwa njengabasetyhini kodwa kule veki iphelileyo abadumileyo abangamadoda basebenze ngexesha leefashoni ezisinike ithemba elikhulu ngekamva le-menswear. Abablogi abangamadoda abalungileyo
Kule veki iphelileyo bekugcwele abantu abadumileyo base-Afrika kunye nabaphembeleli abathathe imingcipheko yefashoni kwaye benxibe imibala emnandi, eshukumayo.
U-Falz - eNigeria
Imvumi yaseNigeria Falz ubunayo iveki. Wayeyindoda enyanisekileyo yase-Afrika kwambatho entle Ukujonga kwe-Agbada okona kusenze saphoswa Umtshato weLagos indawo. Wayila imikhono yakhe emfutshane ye-Agbada enxibe umnqwazi wokudibanisa, izihlangu zesikhumba patent, isacholo, iwatchwatch kunye nesilaydi sayo esimeyina, kunjalo. Inkangeleko yakhe yayinenkalipho kunye nesiko kwaye ngaxeshanye exhaswa kakhulu; Inkangeleko yomntu wonke waseNigeria omalunga nenkcubeko kodwa unqwenela ukuthuthuzelwa kunye nesitayile. Abablogi abangamadoda abalungileyo
Kwilizwekazi liphela, eTanzania, umculo weenkwenkwezi Juma Jux uqhubeke nobuhlobo bakhe bokugcina izinto zilula, zingaqhelekanga kwaye 'zenziwe' ngokupheleleyo. Wanxiba ihempe ebengezelayo yokugqogqa ngeebhulukhwe ezimhlophe ezikrazhileyo kunye nezihlangu, wahamba nebala lokudibanisa amabhulabhu e-burgundy velvet e-Chelsea. Wajika watyikitya isiko lakhe elenzelwe isiko, iringi, iwatchwatch kunye neiglasi zelanga zokwenza izinto.
Lilonke, abantu abadumileyo abangamadoda baseAfrika kunye nabaphembeleli abaphembelelayo, abasoloko bekhangela ezinye zezinto ezitshisa kakhulu ezijongiweyo kwi-Instagram, bagcine ingxelo yabo yefashoni icocekile kwaye yahlukile kwiveki ephelileyo kwaye sabhala eyona nto ilungileyo ukuze uphenjelelwe.
Nazi iveki egqithileyo yokunxiba ezaziwayo zase-Afrika… Abablogi abangamadoda abalungileyo
UT Taymesan - eNigeria